ILELE KAADỊ VIDIYO MAKA ARỤMỌRỤ, NYOCHA ULE. - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Ngosipụta nke kaadị vidiyo dabere na ọsọ ọsọ nke egwuregwu (karịsịa ndị ọhụrụ). N'agbanyeghị, egwuregwu n'otu oge ahụ bụ otu n'ime mmemme kachasị mma maka ịnwale kọmputa n'ozuzu ya (n'otu usoro mmemme ahụ pụrụ iche na-ekewapụkarị ihe nkiri nke egwuregwu na-ejiri ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa nkeji).
Na-emekarị ule mgbe ha chọrọ iji kaadị vidiyo na ụdị ndị ọzọ. Nye ọtụtụ ndị ọrụ, a na-atụle arụmọrụ nke kaadị vidiyo naanị site na ebe nchekwa (ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ kaadị na 1Gb nke nchekwa na-arụ ọrụ ngwa ngwa karịa 2Gb.) Nke bụ eziokwu bụ na ọnụ ọgụgụ ebe nchekwa na-arụ ọrụ maka ụfọdụ uru *, ma ọ dịkwa mkpa ihe nrụnye arụnyere na kaadị vidiyo , ugboro ole na ole, wdg.).
N'isiokwu a, m ga-achọ ịtụle ọtụtụ nhọrọ maka ịnwale kaadị vidiyo maka ịrụ ọrụ na nkwụsi ike.
Ọ dị mkpa!
1) Site n'ụzọ, tupu ịmalite nyocha vidiyo vidiyo, ịkwesịrị imelite (wụnye) ọkwọ ụgbọala na ya. Ụzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ iji ihe pụrụ iche. mmemme maka ịchọpụta na-akpaghị aka na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala:
2) A na-atụkarị arụmọrụ nke kaadị vidiyo site na ọnụ ọgụgụ nke FPS (okpokolo agba kwa nkeji) nke epụtara na egwuregwu dịgasị iche iche na ntọala ndị dị iche iche. Ihe ngosi dị mma maka ọtụtụ egwuregwu bụ 60 Ogwe FPS. Ma maka egwuregwu ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ, atụmatụ ndị na-agbanwe), mmanya ahụ dị na 30 FPS bụ otu ihe bara uru nke ukwuu ...
Ihe bara uru ma dị mfe iji nyochaa ọtụtụ vidiyo vidiyo. Mụ onwe m, echela ule mgbe niile, ma ihe kariri ụdị iri na abụọ, enweghị m otu nke ihe omume ahụ agaghị arụ ọrụ.
FurMark na-eduzi ule nrụgide, na-ekpo ọkụ kaadị vidiyo na oke. Ya mere, a na-etinye kaadị ahụ maka ịrụ ọrụ kachasị elu na nkwụsi ike. Site n'ụzọ, a kwadoro nkwụsi ike nke kọmputa ahụ n'ozuzu ya, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ike esiteghi ike maka kaadị vidiyo na-arụ ọrụ - kọmputa nwere ike ịnwetaghachi ...
Kedu otu esi eduzi ule?
1. Kpochapụ mmemme niile nwere ike iburu PC (egwuregwu, iyi, vidiyo, wdg).
2. Wụnye ma mee ihe omume ahụ. Site n'ụzọ, ọ na-achọpụta na-akpaghị aka kaadị eserese vidiyo gị, ọnọdụ okpomọkụ ya, ụdị ọnọdụ ihuenyo dị.
3. Mgbe ị na-ahọrọ mkpebi ahụ (n'ime mkpebi m bụ mkpebi 1366x768 maka laptọọpụ), ị nwere ike ịmalite nyocha ahụ: iji mee nke a, pịa CPU Benchmark Present 720 or CPU Stress test button.
4. Malite nyochaa kaadị. N'oge a ọ ka mma ịghara imetụ PC aka. Nnwale ahụ na-adịkarị nkeji ole na ole (oge nkwụsị fọdụrụ n'ime pasent ga-egosipụta na ihuenyo ahụ).
4. Mgbe nke ahụ gasịrị, FurMark ga-ewetara gị ihe ọ bụla: ihe niile e ji mara kọmputa gị (laptọọpụ), kaadị nchekwa vidiyo (kachasị), okpokolo agba kwa nkeji, wdg.
Iji tụnyere njirimara gị na ndị ọrụ ndị ọzọ, ịkwesịrị ịpị bọtịnụ ntinye (Nyefee).
5. Na windo nchọgharị nke meghere, ị nwere ike ịhụ ọ bụghị naanị nsonaazụ nsonaazụ gị (site na ọnụọgụ nọmba), kamakwa nsonaazụ ndị ọrụ ndị ọzọ, tụnyere ọnụ ọgụgụ nke isi.
Nke a bụ aha ndị na-asụ Russian na-echetara OST (ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ...). Ihe omume ahụ enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na ndị ọzọ, ma lelee kaadị vidiyo na nnukwu ụlọ mmanya - ọ bụ karịa ike ya!
Mmemme nwere ike ịnwale kaadị vidiyo dị iche iche:
- na nkwado maka pixel pixel dị iche iche;
- na DirectX dị iche (nsụgharị 9 na 11);
- lelee kaadị ahụ nke onye ọrụ ahụ kwuru kpọmkwem;
- chekwaa mmezi nyocha maka onye ọrụ.
Kedu otu esi anwale kaadị n'ime OCCT?
1) Gaa na GPU taabụ: 3D (Nhazi usoro nhazi). Ọzọ ịkwesịrị ịtọ ntọala ntọala:
- oge nyocha (iji chọpụta kaadị vidiyo, ọbụna minit 15-20 ezuo, n'oge a ga-ekpughe ma ọ bụ njehie isi);
- mkpebi na pixel shaders;
- ọ bụ ihe a na-achọsi ike ịgụnye akara maka nchọpụta na ịlele njehie n'oge ule ahụ.
N'ọtụtụ ọnọdụ, nanị ị nwere ike ịgbanwe oge na-agba ọsọ ahụ (usoro ahụ ga-ahazi ndị ọzọ).
2) N'oge ule ahụ, n'akụkụ akaekpe aka ekpe, ị nwere ike ịhụ ihe dịgasị iche iche: kaadị nchekwa, okpokolo agba kwa nkeji (FPS), oge nyocha, wdg.
3) Mgbe njedebe nke ule ahụ, n'aka nri, ị nwere ike ịhụ okpomọkụ na FPS index na atụmatụ mmemme ahụ (n'ọnọdụ m, mgbe usoro iheadị vidiyo ahụ dị 72% (DirectX 11, sig. Shaders 4.0, mkpebi 1366x768) - kaadị vidiyo nyere 52 FPS).
E kwesịrị ilebara anya na njehie n'oge ule (Njehie) - nọmba ha kwesịrị efu.
Njehie n'oge ule.
N'ozuzu, mgbe mgbe mgbe minit 5-10 gasịrị. ọ na-eme ka o doo anya otú kaadị vidiyo si akpa àgwà nakwa ihe ọ bụ ike. Nnwale dị otú ahụ na-enye gị ohere ịlele ya maka ọdịda nke kernel (GPU) na arụmọrụ ebe nchekwa. N'ọnọdụ ọ bụla, mgbe ị na-elele, ekwesịghị ịbụ isi ihe ndị a:
- kọmputa gwụla;
- na-agba ma ọ bụ na-agbanyụ ihe nyocha ahụ, na-efu foto site na ihuenyo ma ọ bụ na-ekowe ya;
- ogho anụnụ anụnụ;
- mmụba dị elu dị elu nke okpomọkụ, ikpo oke ọkụ (ọnọdụ na-adịghị mma nke kaadị vidiyo karịa akara nke Celsius Celsius 85 degrees.) Ihe na-akpata nchịkwabiga ọkụ ókè nwere ike ịbụ: ájá, onye kụrụ afọ n'ala, nkwụsị nke ọma nke ikpe ahụ, wdg);
- ụdị nke ozi ezighi ezi.
Ọ dị mkpa! N'agbanyeghị, ụfọdụ njehie (dịka ọmụmaatụ, ákwà na-acha anụnụ anụnụ, nkwụnye kọmputa, wdg.) Nwere ike kpatara site na "ọrụ ezighi ezi" nke ndị ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ Windows OS. A na-atụ aro ka ị degharịa / melite ha ma nwale ọrụ ahụ ọzọ.
Ebe nrụọrụ weebụ: http://www.3dmark.com/
O doro anya na otu n'ime usoro ndị a ma ama maka ule. Ọtụtụ nsonaazụ ule a bipụtara na akwụkwọ dịgasị iche iche, weebụsaịtị, wdg. - e mere ya kpọmkwem na ya.
N'ozuzu, taa, enwere nsụgharị 3 nke 3D Mak maka ịlele kaadị vidiyo ahụ:
3D Mak 06 - iji nyochaa kaadị vidiyo ochie na-akwado DirectX 9.0.
3D Mark Vantage - maka ịlele kaadị vidiyo na nkwado maka DirectX 10.0.
3D Mak 11 - iji nyochaa kaadị vidiyo na-akwado DirectX 11.0. Lee m ga-elekwasị anya na ya na isiokwu a.
E nwere ọtụtụ nsụgharị maka nbudata na saịtị ọrụ (ndị akwụ ụgwọ, ma enwere nsụgharị - Free Basic Edition). Anyị ga-ahọrọ n'efu maka ule anyị, ma e wezụga nke ahụ, ike ya ezughị ezu maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Kedu otu esi anwale?
1) Gaa usoro ihe omume ahụ, họrọ "nhọrọ nyocha benchmark" naanị pịa bọtịnụ Run 3D Mark (lee nseta ihuenyo n'okpuru ebe a).
2. Na-esote, ule dịgasị iche iche na-amalite ibudata otu n'otu: nke mbụ, ala nke oké osimiri, mgbe ahụ, ọhịa, pyramid, wdg. Nlele ọ bụla na-enyocha otú nhazi na kaadị vidiyo si akpa àgwà mgbe ị na-ede data dị iche iche.
3. Ule na-adịru oge minit 10-15. Ọ bụrụ na ọ nweghị njehie na usoro - mgbe ị mechara njedebe ikpeazụ, otu tab na njikwa gị ga-emeghe na nyochaa gị.
Enwere ike ịgụta ihe ha na nha ya na FPS ndị ọzọ. Site n'ụzọ, a na-egosipụta nsonaazụ kachasị mma na ebe kachasị ama na saịtị ahụ (ị nwere ike nyochaa kalịnda kachasị mma nke kaadị).